Filtrer les éléments par date : jeudi, 24 juin 2021
jeudi, 24 juin 2021 15:37
Fahasalamam-bahoaka : 6 741 no mitondra ny tsimok'aretina VIH
43 700 no isan'ny fitiliana vita, olona miisa 6 741 amin’ireo no mitondra ny tsimok'aretina VIH, ka arahin'ireo mpitsabo ny toem-pahasalamany, ary 5 885 kosa no mihinana fanafody ARV.
Ampahany amin'ireo vokatra notaterina nandritra ny atrik'asa, nanaovana jery todika ireo ezaka natao nandritra ny tetik'asa NMF2, notanterahina tao amin'ny Carlton Anosy ny 23 Jona 2021 ireo.
Raha mitaha ny tanjona napetraky ny ONU/Sida dia azo lazaina fa tsara ny vokatra azon'i Madagasacar hoy Dr Randriatsara Haja, Mpandrindra ny Programa nasionaly IST/SIDA eto anivon'ny Ministeran'ny Fahasalamana.
Na dia eo anefa izany dia mbola mitohy hatrany ny fitadiavana sy fanentanana ireo olona hanao fitiliana amin'ny alalan'ireo paik'ady maro izay apetraka ka iarahan'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka miasa amin'ireo mpiaramiombon’antoka PSI sy ny SE/CNLS.
jeudi, 24 juin 2021 15:19
Fetim-pirenena : Fandrehetana ireo jiro mandravaka ny tanànan'Antananarivo no nanokafana ny fankalazana
Fandrehetana ireo jiro mandravaka ny tanànan'Antananarivo no nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny faha 61 taona niverenan'ny fahaleovantenam-pirenena.
Nidina teny amin'ny Kianja Barea Mahamasina ny Filoha Andry Rajoelina omaly alina nanatanteraka izany niaraka tamin'ny Ben'ny tanànan'ny Kaominina Antananarivo Renivohitra Naina Andriantsitohaina sy ny Governoran'Analamanga Hery Rasoamaromaka, ary notronin'ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta.
"Mamirapiratra Antananarivo. Mijoalajoala maneho ny hambompom-pirenena i Manjakamiadana. Rakotra hazavana ny Kianja Barea ho taratry ny firaisankinan'ny Malagasy iray manontolo, miray fo hanamarika ny faha 61 taona niverenan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara", hoy i Andry Rajoelina.
jeudi, 24 juin 2021 15:05
Fetin’ny Asaramanitra : Nizara arendrina ho an’ireo Akanin-jazany fikambanana FAKA
Nizara arendrina miisa 1500 ho an’ireo mpianatry ny "Akanin-jaza" manerana an’i Madagasikara ny fikambanana "FAKA", eo ambanin’ny fitarihan'ny Sekretera jeneraliny Ramatoa Annick Ratsiraka.
Hetsika efa fanaony isan-taona rehefa ankatoky ny fetin’ny Asaramanitra toa izao, ary nosantarina tao amin'ny Akanin-jaza Lovasoa 67Ha ny alarobia 23 Jona 2021.
jeudi, 24 juin 2021 15:03
24 juin : Journée mondiale des amoureux de l'Alsace
24 juin : Journée mondiale des amoureux de l'Alsace.